Taageerayaasha Liverpool oo war fiican ka helaya xiddig ka tirsan kooxda, kahor kulanka adag ee Man United – Gool FM
(Liverpool) 17 Oct 2019. Taageerayaasha kooxda Liverpool ayaa war fiican ka helaya xiddig ka tirsan kooxdooda, kahor kulanka adag ay Manchester United ku booqan doonaan Axada soo aadan garoonka Old Trafford.
Daafaca reer Cameroon iyo kooxda Liverpool ee Joel Matip ayaa sheegay war ay aad ugu farxeen taageerayaasha Reds, kahor kulanka adag ay kula ciyaari doonaan Manchester United horyaalka Premier League.
Joel Matip ayaa wareysi uu ku bixiyay shabakada rasmiga ah ee kooxda Reds iyo wargeyska Liverpool Echo wuxuu ku xaqiijiyay inuu diyaar u yahay ka qeyb qaadashada kulanka soo aadan ee la wada sugayo ay la ciyaari doonaan Manchester United.
Matip ayaa dhaawac ka soo gaaray inta lagu gudi jiray kulankii dhex maray kooxaha Liverpool iyo Sheffield United, taasoo sababtay inuu ka maqnaado tababarka iyo kulamada kooxda, tan iyo dhamaadka bishii la soo dhaafay.
Yeelkadeeda, Joel Matip ayaa wareysi uu bixiyay wuxuu kaga farxiyay taageerayaasha kooxda Liverpool wuxuuna yiri:
“Waxaan ku soo laabtay tababarka, waxaana rajeenayaa inaan fiicnaado heerka jir ahaaneed”.
“Waxaan ku laabtay tababarka waxaana dareemayaa in xaaladeyda ay aad u fiican tahay, dabcan, haddii ay kooxda ii baahato diyaar ayaan u noqon doonaa taas”.
“Dhaawacyada waa wax iska caadi ah ay la kulmaan ciyaartoyda, waan soo laabtay hadda, waxaan rajeynayaa inaan kusii jiro xaalad jir ahaaneed oo aad u fiican, isla markaana aan diirada saaro waxyaabaha wanaagsan”.